Nzira yekuwana sei shure kwemashure mune nzira dzakasununguka uye dzakarurama?
Zisungo zvekunze kana zvisizvo zvinoshanda senjini ye SEO mumazuva edu. Backlinks dzinonyatsokosheswa nemichina yekutsvaga, kunyanya neGoogle uye inovabatsira kuti vaone nzvimbo yewebsite panzvimbo yehutsva peji peji. Maererano nemamwe magwaro, zvibvumirano zvakashata ndeyechipiri yeGoogle chikamu chekuita mushure mekuenderana kwehuwandu. Pasina backlinks bhizinesi rako harizooneki kune vangave vatengesi uye zvadaro richava kurasika-kugadzira.
Mazuva ano, kushandiswa kwemaitiro ekushanda hakushandisi zvakafanana nemakore akawanda zvisati zvaitika apo nhamba yehutano husinganzwisisi ndiyo yakanyanya kukosha yehutano hwekubatanidza. Parizvino, kutsvaga injini kuongorora hutano hwemashure kure pane huwandu hwavo. Izvo zvakakosha kubva kune zvinyorwa zvinoshandiswa nemasangano ako ari kuuya uye kuti zvakakosha sei kune zvinyorwa pawebsite. Ichokwadi, injini dzinotsvaga dzinoshandisa zvikonzero zvakawanda zvekutarisa hutano hwekubatanidza kwepakati dzekuchengetedza nzvimbo. Kunyange zvakadaro, vavaki vanoziva vanobatana vanosiyanisa zvikamu zvina zvakapetwa - kuwirirana, kuvimba, kusiyana, uye simba. Saka, zvose zvako zvinoshamwaridzana zvinotevera zvinofanira kutevera zvikonzero zvina zvinodiwa. Kana ivo vasiri kutevera zvinodiwa izvi, unofanira kuedza kuvandudza unhu hwavo kana kushandisa Google Disavow Tool kuti uibvise zvachose.
Saka, regai tikurukure zvimwe zvinokosha kuti tive nehutano hwakadini kubva kune mawebsite ane mbiri uye anovimbika.
Nzira dzekuwana zvakanaka backlinks pakuvandudza nzvimbo yepaji yepaji webhusaiti
Chinangwa chekuvaka chikwata hachisi kuita kuti hukama hwako huratidze zvakasikwa ndokuita kuti hukama hwako huvepo. Nzira yakakosha yekuumba backlinks ndeyekubudisa hutano uye kuita zvigadziro kuitira kuti vashandisi vauyane nayo. Zvisinei, muchokwadi, hazviiti nguva dzose. Nzira yakanyatsoshanda ndeyokutsvaga hukuru hwehutano hwehutaneti hwehupenyu nehuwandu hwavanoda kuhubatanidza. Dambudziko nderokuti zvakaoma kuwana mabhizimisi kubva kumusoro kwePejiRank nekuti vanoshanda chete nedzimwe nzvimbo dzakakurumbira uye vane unhu hwakanaka kwazvo. Zvisinei, mundima ino, tinounganidza iwe mamwe mazano ekugadzira mazano anobatsira kuti uwane zvakanaka shure.
Murume anofambisa nzira yakagadzwa naBrian Dean
Unofanirwa kuita tsvakurudzo yako yepamusika uye kuwana mawebsite kana mapeji asina kuwanikwa. Panzvimbo inotevera, unoda kushandisa chero unyanzvi hunobatanidza hunyanzvi hwokugadzira uye uone mazita arikubatanidza nepeji isati yasipo. Kuti uwane ruzivo urwu unogona kushandisa Semalt Web Analyzer kana Majestic Crawling Tool. Panzvimbo inotevera, unofanirwa kusiyanisa zvakakosha kumashandiro ako uye mazita anokosha. Ita chigamba chitsva chezvinhu kana kutora imwe yezvinyorwa zvako zviriko kana vakanamatira kusvika pane iyo uye vopa vadzidzisi vepanzvimbo kuti vatsigire zvisingawanikwe nehutsva kubva pane yako yepaiti. Muzviitiko zvakawanda, vimbani webhusaiti vanobvumirana pane iyi sarudzo sezvo iri mukana wakaisvonaka wekuti ivo vawedzere ruzivo rwekubatanidza kwavo neimwezve dofollow backlink.
Nzira dzakatsemuka nzira yekugadzirisa
Pakutanga, inogona kutaridzika seyakambotaurwa neBrian Dean.Zvisinei, hazvisi zvakafanana mukuita. Maererano nenzira iyi, unofanirwa kuongorora nzvimbo dzako dzinotarirwa uye uwane hukama hwakaputsika hunotungamirira pamapeji asina kuwanikwa. Zvadaro nekushandiswa kweGoogle Chrome Broken Link Checker Extension, unoda kuwana hukama hunoratidza mapeji asina kururama kubva kune imwe nzvimbo yewebhu. Uchishandisa urongwa hweGoogle, iwe uchakwanisa kuwana nhamba isingaverengeki yezvipikano zvakaputsika. Iwe unofanirwa kutarisa hutano huno uye unowana chete zvakakosha uye zvinokonzerwa nemigwagwa. Zvino iwe unofanirwa kuumba chikamu chehurukuro pachikamu chimwechete icho webhusaiti pamusoro uye nekusvika nekutengesa zviri nani kune zvidzidzo zvakatarwa, uchivapa kuti vauane newebsite yako panzvimbo yekanganiso imwe chete Source .